ဖတျသူတိုငျး မကျြရညျဝဲရတဲ့ ရငျ့နငျ့ဖှယျ အဖွဈမှနျလေး – Daily Feed MM
Admin_John | July 9, 2020 | Local News | No Comments
မိုးက မသညျးပမေဲ့ တဈစိမျ့စိမျ့ ရှာနသေညျ ။ဘယျလို ဖွဈမှနျးမသိ မှျောထဲ သှားရမှာ စိတျလေးနမေိသညျ ။အိပျယာထဲမှ ကိုကွီးကိုလညျး သနားမိသညျ ။ ကိုကွီးက ကြှနျတျောတို့ မောငျနှမတှကေို ငဲ့ကာ ကြောငျးထှကျပွီးး မှျောထဲ အရငျ ရောကျနှငျ့သူ ။ ခုတော့ ဆေးသမား ဖွဈနရှောပွီလေ ။မှျောထဲက မသှားလို့ မဖွဈ ၊ ပိုကျဆံရှာရမညျ။ ကိုကွီးကိုလဲ ရှာပွနျချေါပွီးး ဆေးဖွတျပေးခငျြသညျ။ အိမျက ညီနဲ့ ညီမလေးတှကျ ကြောငျးစရိတျက ရှိသေးသညျ ။
covide ကပျရောဂါကွောငျ့ အိမျမှာလဲ ကွပျတညျး နတော ကြှနျတျော သိသညျ ။ ခုရကျပိုငျးး ကြောကျကောငျးတှကေ ရနတေော့ လကျလှတျ မခံခငျြ ။ ကျောဖီမဈ တဈခှကျ သောကျပွီးး သှားမညျဟု ဆုံးဖွတျလိုကျသညျ။
“ဂှမျးး.”ရုတျတရကျ ဆိုသလိုပဲ ကြှနျတျော ကျောဖီမဈခှကျလေး မတျောတဆ ကကြှဲသှားသညျ ။ စိတျလေးနရေတဲ့ ကွားထဲ ခှကျလေးကှဲသှားတော့ အိမျကမိသားစုတှကျ စိတျပူမိ၏ ။ အမနေမှေ ကောငျးရဲ့လားး ။
ဖုနျးနံပါတျတှေ စီသို့ လကျကလေး အလိုလို ရောကျမိသား ဖွဈသှားသညျ။” ဟဲလို အမေ. သားး”” အမေ နကေောငျးလား”
အမကေ နကေောငျးကွောငျးးး သားတို့ ညီအကို နှဈယောကျ အမွနျပွနျလာဖို့ အကွောငျးနဲ့ ဗဒေငျ မေးကွညျ့တာ …သား ဇာတာ မကောငျးး ကွောငျးး ရှာမှာ မရှိ… ရှိတာ လုပျစားမယျ့ အကွောငျး တတှတျတှတျမှာသညျ။
” သားး ဒီတဈကြော ရှာပွီးရငျ ပွနျလာမှာ အမရေဲ့”” ဘာမှ စိတျမပူနဲ့နျော အမေ ၊ သားကော ကိုကွီးကော အတူတူ ပွနျလာမှာ “အမကေ ငိုနသေညျ။အမနေဲ့ ဆကျပွောနိုငျစှမျး မရှိတာနဲ့ ညီလေးနဲ့ ညီမလေး ကို ဖုနျးပေးခိုငျးလိုကျသညျ ။ ညီလေးက ဂိမျးကစားဖို့ ဖုနျးဝယျပေးဖို့နှငျ့ ညီမလေးက စကျဘီး ပူစာသညျ ။
ကိုကွီးပွနျလာရငျ ဝယျပေးမယျ ဆိုတဲ့ အကွောငျးး ပွောပွီးး ညီလေး ညီမလေးအား အာဘှား ပေးခဲ့ သေးသညျ။အိပျယာထဲမှ ကိုကွီးကို -” ကိုကွီးး ညီလေးး မှျောထဲ သှားတော့မယျနျော”ကိုကွီးက ညီလေးး နားပါဦးလားဆိုပွီး လှမျးပွောသေးသညျ ။ နားမရဘူးး ကိုကွီးရေ ဒီရကျပိုငျး ကြောကျကောငျးတှေ ထှကျနပွေီလေ ။ ဒီတဈကြော ရှာပွီးရငျ ညီလေးကော ကိုကွီးကော အတူတူ ပွနျနားကွမယျလို့ စိတျထဲက ပွောမိသညျ ။ ! အျော. ခဈြသူစီ စာပို့ရအုံးမယျ ။
မောနငျးးပါ ခဈြ ။ အကို မှျောထဲ သှားတော့မယျနျော ။ကွညျ့စမျးး ကောငျမလေးး ခုထိ မနိုးသေးဘူးး အိပျပုတျ ကြှနျတျောက ကြှနျတေျာ့ကောငျမလေးကို အရမျးခဈြတာ ။ သူကလဲ ကြှနျတေျာ့ကို ခဈြတယျ ။
” သူငယျခငျြးရေ သှားရအောငျ”သူငယျခငျြးအား အျောချေါရငျးး သူငယျခငျြးး နှဈယောကျ အတူ ထှကျခဲ့ သညျ ။မှျောထဲ ရောကျတော့ ကြှနျတျောတို့ နောကျကြ နပွေီ ။ ဒီနရော က ကြောကျလဲရ ကြောကျကောငျးလဲ ထှကျဆိုတော့ အောကျထဲမှာတငျ လူ နှဈရာ ကြျောလောကျ ရောကျနှငျ့နပွေီ ။မိုးကလဲ ရှာကောငျးတုနျးး ။ သူငယျခငျြးး နှဈယောကျ အိမျမကျကိုယျစီဖွငျ့ တှငျးထဲသို့ ဆငျးးရှာတုနျးး
ထိုအခြိနျတှငျ….. ” ပွေးဟေ့! ပွေး ပွေး”ဆိုတဲ့ အသံ…. သဲ့သဲ့ ကွားလိုကျမိသညျ ။
” ဟေးးး အားဒီ …ဒီနေ့ ကြောကျတှေ အမြားကွီးး ရတယျဟ ” လို့ သူငယျခငျြးကို အျောပွောမိသညျ။ သူငယျခငျြးကလဲ သူလဲ ရကွောငျး လကျမထောငျပွသညျ ။ မှျောထဲက လူ နှဈရာကြျော အကုနျလုံးး အပွုံးလေးတှေ ကိုယျစီဖွငျ့ ။ သူငယျခငျြး အားဒီက လှမျးအျောသေးသညျ ။ ” ငါတို့ လျောပနျးဖွဈပွီကှ” လို့ကြှနျတျောလဲ ဒါလေးက အမတှေ့ကျ ကြောကျစိမျးလကျကောကျလေးး ၊
ဒါလေးက ခဈြသူတှကျ လညျဆှဲသီးလေး ဆိုပွီးး သကျသကျဖယျထားပွီး အရမျးပြျောနမေိပွီ ။ရသငျ့သလောကျလဲ ရပွီးပီမို့ သူငယျခငျြးအားး ချေါကာ ပွနျခဲ့ကွပွီ ။ မိုးက မသညျးပမေယျ့ တဈစိမျ့စိမျ့ ကတြုနျးးး ရှမှေ့ာ ငိုသံ သဲ့သဲ့ ကွားနရေသညျ။ အနားနီးလာတော့ ငိုသံကို ပီပွငျစှာကွားလာရသညျ ။ ငိုသံက…. ” ကိုကွီးး ငိုသံ ၊ ကိုကွီးး ငိုသံ “ကြှနျတျော ကိုကွီးအား စိတျပူစှာဖွငျ့ အပွေးအလှား သှားမိ၏
ကိုကွီးသညျ ရုပျအလောငျးး တဈခုအားး ဖတျငိုနသေညျ ။ ဘေးမှာ သူငယျခငျြးး အားဒီ ရဲ့ ရုပျအလောငျးး ။ သသေခြောခြာ ကွညျ့လိုကျတော့ ….ကိုကွီး ဖတျထားသညျမှာ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ ဖွဈနသေညျ ။” အာ! ဘာတှလေဲ ဘာတှလေဲ”သူငယျခငျြး အားဒီက ကြှနျတော့ လကျကလေး ဆုတျကာ လာပွောသညျ ။
” ငါတို့ ပါသှားပွီ” တဲ့ ။ကြှနျတျော အသံမထှကျနိုငျအောငျပငျ အလှနျဝမျးနညျးး သှားမိ၏ ၊ ဒူးထောကျကာ ရှိုကျကွီးး တငငျငငျ ငိုနမေိ သညျ ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ လောပနျးလောငျး အိမျမကျတှေ ဘယျရောကျကုနျပွီလဲ ။
ဒါဆို …ဒီကြောကျစိမျးတှကေ ငါတို့ အရိုးတှပေေါ့ ။ ငါတို့ အရိုးတှပေေါ့ ။ကြှနျတျော မကျြရညျတှေ ဖွိုငျဖွိုငျကကြာ ကြောကျစိမျးတုနျးတှကေို ဦးတညျရာမဲ့ လှငျ့ပဈနမေိသညျ ။ ” ဒါ ကြောကျစိမျးတှေ မဟုတျဘူးး အရိုးတှေ အရိုးး တှေ” ဟု ပါးစပျကလဲ ပွောမိသေးသညျ ။လှငျ့ပဈသညျ့ ကြောကျစိမျးတုနျးတှထေဲမှာတော့ အမတှေကျ လကျကောကျ လုပျပေးရနျနှငျ့ ခဈြသူတှကျ လညျဆှဲသီးလေး မပါ ။
ကိုကွီးး ကြှနျတော့ ရုပျအလောငျးး ဖတျကာငိုတုနျးး ။ အန်တယျ ရာယျ မြားမှနျးသိရဲ့နဲ့ ဘာလို့ လိုကျလာတာလဲ ညီလေးရယျတဲ့ ။ ညီလေး ကိုကွီးနောကျ လိုကျလာလို့ ဒီလို ဖွဈရတာတဲ့ ။ကြှနျတျော ကိုကွီးဘေးနား ဒူးထောကျထိုငျခလြိုကျသညျ။
ကိုကွီးရယျ….သမေငျးနဲ့ နီးမှနျး သိပမေယျ့အိမျမကျနဲ့လဲ နီးတာမို့ညီလေးး ဒီလမျးကို ရှေးခွယျမိတာပါ။ စှနျ့ပဈ မွဇောပုံ ဆိုတာမပွို လဲ အောငျ ထိနျးထားရတဲ့အသကျငငျနတေဲ့ တောငျ တဈတောငျ ဆိုတာညီလေးး သိပါတယျ ။ ရမေဆေး ကြောကျတဈတုံးဟာအရိုးယောငျ ဆောငျထားတဲ့အသားတုံးး တဈတုံးး ဖွဈနိုငျတယျ ဆိုတဲ့ရမေဆေး သမားတှရေဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြနဲ့ညီလေးး လာခဲ့တာပါ ။
အမှိုကျပုံပျေါက ခှေးတှေ ဟာစားကွှငျးစားကနျြ ရှာရသလို မွဇောပုံ ပျေါက ညီလေးတို့ ဘဝဟာလညျးကြောကျကွှငျးကြောကျကနျြ ရှာရမှာပဲ အကို။သမေငျးနဲ့ နီးပမေယျ့အိမျမကျနဲ့လဲ နီးတာမို့ညီလေးး ဒီလမျးကိုရှေးခဲ့ မိတာပါ ကိုကွီးရယျ ။ ကိုကွီးးဘေးမှာ ဒူးထောကျပွီးး ကြှနျတျော ပွောနမေိသညျ ။
ဒါပမေယျ့ …..ကြှနျတျောပွောတာတှေ ကိုကွီးမကွား နိုငျတော့ ပါ ။
ကြှနျတေျာ့ ရုပျအလောငျး ဘေးမှ အနျတီကွီးက သူ့သား အလောငျးအားး ဖှဖေ့တျကာ” သားးး အဖကေောငျး အမကေောငျးး ရှာနျော”” သားးး အဖကေောငျး အမကေောငျး ရှာနျော”” နောငျဘဝ အမတေို့ဆီပွနျမလာနဲ့တော့ နျော”တဲ့။ကြှနျတျော အလှနျ ဝမျးနညျးသှားမိသညျ။ အမကေို့လဲ သတိရမိ သှားသညျ။
အမေ…သား သတငျးကွားရငျအမေ မငိုနဲ့ နျော ။လယျတှသေိမျးလို့ ဆန်ဒ ပွရငျးးထောငျထဲ ရောကျနတေဲ့ အဖကေို့လဲ ပွောပေးပါ ။သား သတိရပါတယျလို့ ။သားကို ဒီအရှယျထိ ပွုစုပွိုးထောငျပေးတဲ့အဖေ အမေ တို့ ကြေးဇူးကိုမမပေ့ါဘူးးးသား ပွနျလာခဲ့မယျနျော အမေ ။သားကို မနှငျပါနဲ့ နျော ။နျော အမေ. နျော ။သားပွောတာတှေ အမကွေား နိုငျပါစနေျော ။
ကြှနျတျော ဘယျလောကျကွာကွာ ငိုနမေိမှနျးး မသိ ။ သူငယျခငျြးက ပခုံးလေး လာပုတျမှ သတိရမိသညျ ။အခုတော့ ….လှမျးရေးထကျ ဝမျးရေးခတျမို့ ခဈြသူနဲ့ လဲ ဘဝခွားခဲ့ပွီ ။ တောငျတနျးတှလေညျး ပြောကျခဲ့ပွီ ဥရုခြောငျးကွီးလညျးနှောကျခဲ့ပွီ၊စမျးခြောငျးတှလေညျးပြောကျကုနျပွီလေ။ သဘေေးကို ခွဖြေားမှာထား ရမေဆေးရှာစားနရေတဲ့ ဘဝတှေ….ခဗြားတို့ကတော့ရခွေားမွခွေားအနခွေားတဲ့ကောငျတှနေဲ့ဝစေားနကွေတာ၊လိုခွငျတာဘဲသိပွီး..ပေးရကောငျးမှနျးမသိတဲ့လူတဈစုကွောငျ့ တောငျတနျးတှလေညျး ရကေနျဖွဈကုနျပါပီလေ၊
မထူးတော့ပါဘူး ….တနတေ့ော့ထူးခွားရမှာပါလဆေိုတဲ့ ရမေဆေးတှဘေဲ မွစောပငျ ဖွဈခဲ့ရလပွေီ။ကြှနျတျောတို့ ရုပျအလောငျးမြားကို ကူညီ ကယျဆယျပေးသော မွနျမာနိုငျငံ မီးသကျတပျဖှဲ့ဝငျမြားး ၊ပရဟိတအဖှဲ့အစညျးမြား၊ ဘဝတူ ရမေဆေး သမားမြားကို ကြေးဇူးး အထူးတငျပါတယျလို့ တမလှနျကနေ ပွောပါရစေ ။
ဘယျအခြိနျထိ တှဝေနေမေိမှနျး မသိ ။ သူငယျခငျြးက ပုံးခုံးလေး လာဖတျပွီး ပွောမှ သတိရမိသညျ ။ ငါ့တို့တှေ ကိုယျ့အရိုး ကိုယျ ပွနျတူးနတေဲ့ဘဝ ကွီးကနေ လှတျခဲ့တာပေါ့ ကှာ တဲ့ ။ ကြှနျတျော ရှိုကျသံ တဈခကျြ ထှကျ လာမိသညျ ။
” ဟုတျတယျ ငါ ကို့အရိုး ကိုယျပွနျတူးတဲ့ ဘဝက လှတျခဲ့တာ “ကိုယျ့အရိုးး ကိုယျပွနျတူးးတဲ့ ဘဝက လှတျခဲ့တာဟလေို့ …ဖားကနျ့တခှငျလုံးး ကွားအောငျ အျောလိုကျမိသညျ ။
ဒါ ဒို့မွေ လေ ။
မိုးက မသည်းပေမဲ့ တစ်စိမ့်စိမ့် ရွာနေသည် ။ဘယ်လို ဖြစ်မှန်းမသိ မှော်ထဲ သွားရမှာ စိတ်လေးနေမိသည် ။အိပ်ယာထဲမှ ကိုကြီးကိုလည်း သနားမိသည် ။ ကိုကြီးက ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမတွေကို ငဲ့ကာ ကျောင်းထွက်ပြီးး မှော်ထဲ အရင် ရောက်နှင့်သူ ။ ခုတော့ ဆေးသမား ဖြစ်နေရှာပြီလေ ။မှော်ထဲက မသွားလို့ မဖြစ် ၊ ပိုက်ဆံရှာရမည်။ ကိုကြီးကိုလဲ ရွာပြန်ခေါ်ပြီးး ဆေးဖြတ်ပေးချင်သည်။ အိမ်က ညီနဲ့ ညီမလေးတွက် ကျောင်းစရိတ်က ရှိသေးသည် ။
covide ကပ်ရောဂါကြောင့် အိမ်မှာလဲ ကြပ်တည်း နေတာ ကျွန်တော် သိသည် ။ ခုရက်ပိုင်းး ကျောက်ကောင်းတွေက ရနေတော့ လက်လွတ် မခံချင် ။ ကော်ဖီမစ် တစ်ခွက် သောက်ပြီးး သွားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
“ဂွမ်းး.”ရုတ်တရက် ဆိုသလိုပဲ ကျွန်တော် ကော်ဖီမစ်ခွက်လေး မတော်တဆ ကျကွဲသွားသည် ။ စိတ်လေးနေရတဲ့ ကြားထဲ ခွက်လေးကွဲသွားတော့ အိမ်ကမိသားစုတွက် စိတ်ပူမိ၏ ။ အမေနေမှ ကောင်းရဲ့လားး ။
ဖုန်းနံပါတ်တွေ စီသို့ လက်ကလေး အလိုလို ရောက်မိသား ဖြစ်သွားသည်။” ဟဲလို အမေ. သားး”” အမေ နေကောင်းလား”
အမေက နေကောင်းကြောင်းးး သားတို့ ညီအကို နှစ်ယောက် အမြန်ပြန်လာဖို့ အကြောင်းနဲ့ ဗေဒင် မေးကြည့်တာ …သား ဇာတာ မကောင်းး ကြောင်းး ရွာမှာ မရှိ… ရှိတာ လုပ်စားမယ့် အကြောင်း တတွတ်တွတ်မှာသည်။
” သားး ဒီတစ်ကျော ရှာပြီးရင် ပြန်လာမှာ အမေရဲ့”” ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့နော် အမေ ၊ သားကော ကိုကြီးကော အတူတူ ပြန်လာမှာ “အမေက ငိုနေသည်။အမေနဲ့ ဆက်ပြောနိုင်စွမ်း မရှိတာနဲ့ ညီလေးနဲ့ ညီမလေး ကို ဖုန်းပေးခိုင်းလိုက်သည် ။ ညီလေးက ဂိမ်းကစားဖို့ ဖုန်းဝယ်ပေးဖို့နှင့် ညီမလေးက စက်ဘီး ပူစာသည် ။
ကိုကြီးပြန်လာရင် ဝယ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းး ပြောပြီးး ညီလေး ညီမလေးအား အာဘွား ပေးခဲ့ သေးသည်။အိပ်ယာထဲမှ ကိုကြီးကို -” ကိုကြီးး ညီလေးး မှော်ထဲ သွားတော့မယ်နော်”ကိုကြီးက ညီလေးး နားပါဦးလားဆိုပြီး လှမ်းပြောသေးသည် ။ နားမရဘူးး ကိုကြီးရေ ဒီရက်ပိုင်း ကျောက်ကောင်းတွေ ထွက်နေပြီလေ ။ ဒီတစ်ကျော ရှာပြီးရင် ညီလေးကော ကိုကြီးကော အတူတူ ပြန်နားကြမယ်လို့ စိတ်ထဲက ပြောမိသည် ။ ! အော်. ချစ်သူစီ စာပို့ရအုံးမယ် ။
မောနင်းးပါ ချစ် ။ အကို မှော်ထဲ သွားတော့မယ်နော် ။ကြည့်စမ်းး ကောင်မလေးး ခုထိ မနိုးသေးဘူးး အိပ်ပုတ် ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ကောင်မလေးကို အရမ်းချစ်တာ ။ သူကလဲ ကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ် ။
” သူငယ်ချင်းရေ သွားရအောင်”သူငယ်ချင်းအား အော်ခေါ်ရင်းး သူငယ်ချင်းး နှစ်ယောက် အတူ ထွက်ခဲ့ သည် ။မှော်ထဲ ရောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ နောက်ကျ နေပြီ ။ ဒီနေရာ က ကျောက်လဲရ ကျောက်ကောင်းလဲ ထွက်ဆိုတော့ အောက်ထဲမှာတင် လူ နှစ်ရာ ကျော်လောက် ရောက်နှင့်နေပြီ ။မိုးကလဲ ရွာကောင်းတုန်းး ။ သူငယ်ချင်းး နှစ်ယောက် အိမ်မက်ကိုယ်စီဖြင့် တွင်းထဲသို့ ဆင်းးရှာတုန်းး
ထိုအချိန်တွင်….. ” ပြေးဟေ့! ပြေး ပြေး”ဆိုတဲ့ အသံ…. သဲ့သဲ့ ကြားလိုက်မိသည် ။
” ဟေးးး အားဒီ …ဒီနေ့ ကျောက်တွေ အများကြီးး ရတယ်ဟ ” လို့ သူငယ်ချင်းကို အော်ပြောမိသည်။ သူငယ်ချင်းကလဲ သူလဲ ရကြောင်း လက်မထောင်ပြသည် ။ မှော်ထဲက လူ နှစ်ရာကျော် အကုန်လုံးး အပြုံးလေးတွေ ကိုယ်စီဖြင့် ။ သူငယ်ချင်း အားဒီက လှမ်းအော်သေးသည် ။ ” ငါတို့ လော်ပန်းဖြစ်ပြီကွ” လို့ကျွန်တော်လဲ ဒါလေးက အမေ့တွက် ကျောက်စိမ်းလက်ကောက်လေးး ၊
ဒါလေးက ချစ်သူတွက် လည်ဆွဲသီးလေး ဆိုပြီးး သက်သက်ဖယ်ထားပြီး အရမ်းပျော်နေမိပြီ ။ရသင့်သလောက်လဲ ရပြီးပီမို့ သူငယ်ချင်းအားး ခေါ်ကာ ပြန်ခဲ့ကြပြီ ။ မိုးက မသည်းပေမယ့် တစ်စိမ့်စိမ့် ကျတုန်းးး ရှေ့မှာ ငိုသံ သဲ့သဲ့ ကြားနေရသည်။ အနားနီးလာတော့ ငိုသံကို ပီပြင်စွာကြားလာရသည် ။ ငိုသံက…. ” ကိုကြီးး ငိုသံ ၊ ကိုကြီးး ငိုသံ “ကျွန်တော် ကိုကြီးအား စိတ်ပူစွာဖြင့် အပြေးအလွှား သွားမိ၏
ကိုကြီးသည် ရုပ်အလောင်းး တစ်ခုအားး ဖတ်ငိုနေသည် ။ ဘေးမှာ သူငယ်ချင်းး အားဒီ ရဲ့ ရုပ်အလောင်းး ။ သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့ ….ကိုကြီး ဖတ်ထားသည်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်နေသည် ။” အာ! ဘာတွေလဲ ဘာတွေလဲ”သူငယ်ချင်း အားဒီက ကျွန်တော့ လက်ကလေး ဆုတ်ကာ လာပြောသည် ။
” ငါတို့ ပါသွားပြီ” တဲ့ ။ကျွန်တော် အသံမထွက်နိုင်အောင်ပင် အလွန်ဝမ်းနည်းး သွားမိ၏ ၊ ဒူးထောက်ကာ ရှိုက်ကြီးး တငင်ငင် ငိုနေမိ သည် ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လောပန်းလောင်း အိမ်မက်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ ။
ဒါဆို …ဒီကျောက်စိမ်းတွေက ငါတို့ အရိုးတွေပေါ့ ။ ငါတို့ အရိုးတွေပေါ့ ။ကျွန်တော် မျက်ရည်တွေ ဖြိုင်ဖြိုင်ကျကာ ကျောက်စိမ်းတုန်းတွေကို ဦးတည်ရာမဲ့ လွင့်ပစ်နေမိသည် ။ ” ဒါ ကျောက်စိမ်းတွေ မဟုတ်ဘူးး အရိုးတွေ အရိုးး တွေ” ဟု ပါးစပ်ကလဲ ပြောမိသေးသည် ။လွင့်ပစ်သည့် ကျောက်စိမ်းတုန်းတွေထဲမှာတော့ အမေတွက် လက်ကောက် လုပ်ပေးရန်နှင့် ချစ်သူတွက် လည်ဆွဲသီးလေး မပါ ။
ကိုကြီးး ကျွန်တော့ ရုပ်အလောင်းး ဖတ်ကာငိုတုန်းး ။ အန္တယ် ရာယ် များမှန်းသိရဲ့နဲ့ ဘာလို့ လိုက်လာတာလဲ ညီလေးရယ်တဲ့ ။ ညီလေး ကိုကြီးနောက် လိုက်လာလို့ ဒီလို ဖြစ်ရတာတဲ့ ။ကျွန်တော် ကိုကြီးဘေးနား ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည်။
ကိုကြီးရယ်….သေမင်းနဲ့ နီးမှန်း သိပေမယ့်အိမ်မက်နဲ့လဲ နီးတာမို့ညီလေးး ဒီလမ်းကို ရွေးခြယ်မိတာပါ။ စွန့်ပစ် မြေဇာပုံ ဆိုတာမပြို လဲ အောင် ထိန်းထားရတဲ့အသက်ငင်နေတဲ့ တောင် တစ်တောင် ဆိုတာညီလေးး သိပါတယ် ။ ရေမဆေး ကျောက်တစ်တုံးဟာအရိုးယောင် ဆောင်ထားတဲ့အသားတုံးး တစ်တုံးး ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ရေမဆေး သမားတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ညီလေးး လာခဲ့တာပါ ။
အမှိုက်ပုံပေါ်က ခွေးတွေ ဟာစားကြွင်းစားကျန် ရှာရသလို မြေဇာပုံ ပေါ်က ညီလေးတို့ ဘဝဟာလည်းကျောက်ကြွင်းကျောက်ကျန် ရှာရမှာပဲ အကို။သေမင်းနဲ့ နီးပေမယ့်အိမ်မက်နဲ့လဲ နီးတာမို့ညီလေးး ဒီလမ်းကိုရွေးခဲ့ မိတာပါ ကိုကြီးရယ် ။ ကိုကြီးးဘေးမှာ ဒူးထောက်ပြီးး ကျွန်တော် ပြောနေမိသည် ။
ဒါပေမယ့် …..ကျွန်တော်ပြောတာတွေ ကိုကြီးမကြား နိုင်တော့ ပါ ။
ကျွန်တော့် ရုပ်အလောင်း ဘေးမှ အန်တီကြီးက သူ့သား အလောင်းအားး ဖွေ့ဖတ်ကာ” သားးး အဖေကောင်း အမေကောင်းး ရှာနော်”” သားးး အဖေကောင်း အမေကောင်း ရှာနော်”” နောင်ဘဝ အမေတို့ဆီပြန်မလာနဲ့တော့ နော်”တဲ့။ကျွန်တော် အလွန် ဝမ်းနည်းသွားမိသည်။ အမေ့ကိုလဲ သတိရမိ သွားသည်။
အမေ…သား သတင်းကြားရင်အမေ မငိုနဲ့ နော် ။လယ်တွေသိမ်းလို့ ဆန္ဒ ပြရင်းးထောင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ အဖေ့ကိုလဲ ပြောပေးပါ ။သား သတိရပါတယ်လို့ ။သားကို ဒီအရွယ်ထိ ပြုစုပြိုးထောင်ပေးတဲ့အဖေ အမေ တို့ ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးးးသား ပြန်လာခဲ့မယ်နော် အမေ ။သားကို မနှင်ပါနဲ့ နော် ။နော် အမေ. နော် ။သားပြောတာတွေ အမေကြား နိုင်ပါစေနော် ။
ကျွန်တော် ဘယ်လောက်ကြာကြာ ငိုနေမိမှန်းး မသိ ။ သူငယ်ချင်းက ပခုံးလေး လာပုတ်မှ သတိရမိသည် ။အခုတော့ ….လွမ်းရေးထက် ဝမ်းရေးခတ်မို့ ချစ်သူနဲ့ လဲ ဘဝခြားခဲ့ပြီ ။ တောင်တန်းတွေလည်း ပျောက်ခဲ့ပြီ ဥရုချောင်းကြီးလည်းနှောက်ခဲ့ပြီ၊စမ်းချောင်းတွေလည်းပျောက်ကုန်ပြီလေ။ သေဘေးကို ခြေဖျားမှာထား ရေမဆေးရှာစားနေရတဲ့ ဘဝတွေ….ခဗျားတို့ကတော့ရေခြားမြေခြားအနေခြားတဲ့ကောင်တွေနဲ့ဝေစားနေကြတာ၊လိုခြင်တာဘဲသိပြီး..ပေးရကောင်းမှန်းမသိတဲ့လူတစ်စုကြောင့် တောင်တန်းတွေလည်း ရေကန်ဖြစ်ကုန်ပါပီလေ၊
မထူးတော့ပါဘူး ….တနေ့တော့ထူးခြားရမှာပါလေဆိုတဲ့ ရေမဆေးတွေဘဲ မြေစာပင် ဖြစ်ခဲ့ရလေပြီ။ကျွန်တော်တို့ ရုပ်အလောင်းများကို ကူညီ ကယ်ဆယ်ပေးသော မြန်မာနိုင်ငံ မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များး ၊ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘဝတူ ရေမဆေး သမားများကို ကျေးဇူးး အထူးတင်ပါတယ်လို့ တမလွန်ကနေ ပြောပါရစေ ။
ဘယ်အချိန်ထိ တွေဝေနေမိမှန်း မသိ ။ သူငယ်ချင်းက ပုံးခုံးလေး လာဖတ်ပြီး ပြောမှ သတိရမိသည် ။ ငါ့တို့တွေ ကိုယ့်အရိုး ကိုယ် ပြန်တူးနေတဲ့ဘဝ ကြီးကနေ လွတ်ခဲ့တာပေါ့ ကွာ တဲ့ ။ ကျွန်တော် ရှိုက်သံ တစ်ချက် ထွက် လာမိသည် ။
” ဟုတ်တယ် ငါ ကို့အရိုး ကိုယ်ပြန်တူးတဲ့ ဘဝက လွတ်ခဲ့တာ “ကိုယ့်အရိုးး ကိုယ်ပြန်တူးးတဲ့ ဘဝက လွတ်ခဲ့တာဟေ့လို့ …ဖားကန့်တခွင်လုံးး ကြားအောင် အော်လိုက်မိသည် ။
ဒါ ဒို့မြေ လေ ။
စနေ နဲ့ တနင်ျဂနှမှော မိုးထဈခြုနျးရှာမညျ့ မွို့မြားစာရငျး
ဘယျညာပေါငျ ကွောငျအတကျအဆငျးနဲ့ ဖောကျထှငျးဝိဇ်ဇာကို ခကျခကျခဲခဲဖမျးခဲ့တဲ့ စခနျးမှူး ( ဖွဈရပျမှနျ)